Fiovana lehibe ilainao hatao amin'ny fivorian'ny fivarotana fanao isan-taona | Martech Zone
Fiovana lehibe ilainao hatao amin'ny fivorian'ny fivarotana fanao isan-taona
Alarobia, Novambra 15, 2017 Ashley Welch
Tonga izao fa fotoana amin'ny taona indray, raha ny mpivarotra Sales and Sales Enablement dia mikasa ny hanao fivorian'ny fivarotana isan-taona. Tsy asa kely izany. Ho fanampin'ny lojika ifotony mifantina ny toerana halehany, ny fanakanana ny efitrano ary ny fitadiavana toerana hihaonana, misy faneriterena tsy voatonona ny amin'ny tampon'ny fivoriana tamin'ny taona lasa. Ahoana no ahafahantsika mampitombo sy manatsara azy? Mpikabary vahiny inona no hanome aingam-panahy? Inona ny loka homena antsika mpandray anjara ambony indrindra?
Azontsika izany. Nanatrika ny maro tamin'ireny izahay noho ny asa aman-draharaha, ary manampy ny mpanjifanay izahay hanangana kick-off ho an'ny ekipan'izy ireo amin'ny fangatahana: Ahoana raha ny fomba fijerin'ny mpanjifa no kasainao hatao amin'ny fivoriana? Ireto misy hevitra miompana amin'ny mpanjifa dimy izay azonao andramana atao amin'ny fihaonan'ny taona manaraka ho tsara indrindra:
Fandrafetana ny kaonty stratejika. Rehefa mieritreritra kaonty stratejika isika, dia mieritreritra ny kaonty ambony ananantsika, ny mpanjifa izay mividy betsaka indrindra avy aminay. Amin'ny fivoriana fanombohana dia matetika no omena fotoana handinihana izay vokatra sy serivisy fanampiny azo amidy hampitomboana ny vola miditra ary hanamafisana kokoa ny fiaraha-miasa. Asa lehibe io, fa mety ho lasa insular haingana - izaho, izaho, isika. Ny vokatra, ny serivisy, ny farany ambany. Ny refameur? Eritrereto indray hoe iza no heverinao fa kaonty stratejika amin'ny lafiny Extremes sy mainstreams. Ny mpanjifanao mahazatra dia mety ho ireo kaonty lehibe kokoa izay mividy sy mankafy habetsahan'ny vokatrao sy serivisinao. Saingy tokony hieritreritra ny hampiditra ny sasany amin'ireo mpanjifanao Extreme ianao: iza amin'ireo mpanjifa no manao zavatra mahaliana indrindra amin'ny vokatrao sy serivisinao? Asao izy ireo hiditra ao amin'ny tontolon'ny mpanjifa ary angataho izy ireo hiresaka momba ny kaonty stratejika ataon'izy ireo.
Asao ny mpanjifa hahafantatra ireo mpanao anao ambony. Miasa mafy ny mpivarotra - ary ny mpivarotra tsara indrindra aminao dia mety ho lasa mitoka-monina mora. Noho ireo antony ireo sy antony maro hafa dia zava-dehibe tokoa ny fanekena ireo mpilalao anao manoloana ny mpiara-mianatra aminy. Azonao atao ny manasa ny mpanjifanao mpanakanto ambony hiresaka momba azy ireo — omeo loka aza izy ireo. Io angamba no fiderana tsara indrindra azon'ny ekipanao.
Mandrisaha fanavaozana miaraka amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny tantara. Matetika isika maheno amin'ireo mpanjifantsika fa maniry hanome aingam-panahy izy ireo. Ny mpanjifa dia te-hiara-miasa amin'ireo matihanina amin'ny varotra mazoto izay afaka manampy azy ireo hieritreritra ivelan'ny boaty. Eto no idiran'ny analog. Raha te hanana analogy mahafinaritra ianao dia eritrereto mandritra ny fotoana fohy ny olana manokana ezahan'ny olanao resena. Avy eo, diniho ny toe-javatra samy hafa tanteraka izay ahitan'ny olona fomba hamahana io olana io ihany. Ity misy ohatra iray:
Ekipa iray niara-niasa taminay no tsy nieritreritra hoe nifandray tsara tamin'ny mpanjifany izy ireo. Tsapan'izy ireo ny ankamaroan'ny asa nahatonga ny fahombiazan'ny mpanjifany dia nitranga tao ambadiky ny zava-nitranga, izay nahatonga ny fahaverezan'ny fandrisihan'ny ekipa. The Analog: Notontosaina tany New Orleans ity fivorian'ny ekipa ity, ka nentinay nitsidika ny iray amin'ireo trano fisakafoanana malaza an'i Emeril Lagasse. Sahala amin'ity ekipa ity, ny chef ary ny chef sous no miasa ao ambadiky ny sehatra, saingy ny asan'izy ireo no ankafizin'ny mpanjifa amin'ny farany. Ny ekipa dia nandany fotoana niaraka tamin'ny Chef Executive, chef sous maromaro ary ny General Manager nanadihady azy ireo momba ny zavatra niainany. Vokatr'izany dia nanomboka nieritreritra hafa momba ny fomba ahafahany mifandray bebe kokoa amin'ny mpanjifany izy ireo ary mijanona ho mazoto.
Fanavaozana ny vokatra sy ny marketing. Tianay ny manidy ny elanelana misy eo amin'ny orinasanao sy ny mpanjifanao ary koa eo anelanelan'ny mpamolavola vokatrao, ny mpivarotrao ary ny mpivarotrao. Raha tokony hanasa ny namany varotra sy ny vokatra hampidina ny farany sy lehibe indrindra izy ireo dia angataho izy ireo hitondra ny vaovaon'izy ireo miaraka amin'ny pensilihazo maranitra, ary ampiasao ny fotoana anombohana mba hampifandraisana ny vokatra, ny marketing, ary ny mpivarotrao amin'ny mpanjifa. Izy io dia mandaitra indrindra amin'ny Tip # 1 – ny mpanjifanao Extreme sy Mainstream. Hevero ho toy ny fanandramana fifanakalozan-kevitra amin'ireo mpanjifa momba ny tolotra vaovao sy fahazoana valiny amin'ny fotoana tena izy avy amin'ireo olona izay manan-danja indrindra — ireo izay hividy izany.
Fahaizana-fanorenana. Ny tendronay farany dia mifandraika amin'ny fananganana ny fahaiza-manao napetraky ny varotrao. Ny olona mpivarotra dia mitady fomba hanatsarana ny fahaiza-manaony hatrany, hanatsara ny lalao sy hifaliany fahombiazana bebe kokoa. Raha jerena ny lohahevitry ny centricity-ny mpanjifa, dia hizara fanazaran-tena tianay izahay:
Tianay ny mandefa ny mpivarotra amin'izay ahitan'izy ireo fa mahazo aina indrindra - eny an-tsaha! Fikarohana ivon-toerana fivarotana antsinjarany amin'ny toerana anaovanao ny kick-off. Mitadiava ivontoerana antsinjarany ezaha hitady mpivady ao anaty tsanganana mahazatra izay ambany sy avo ny faran'ny. Ohatra, ny Toys R Us sy Build-a-Bear ho an'ny kilalao ho an'ny ankizy, ny Chevy ary ny fivarotana Tesla ho an'ny fiara, sns. Ity fanazaran-tena ity dia tsara indrindra atao amin'ny tsiroaroa, ary ny andraikitr'ireo mpivady tsirairay dia ny mitsidika ireo fivarotana roa ananany ary mijery tsara izay mampitombo na mampihena ny fifandraisan'ny mpanjifa. Manome toky izahay fa hiverina indray ny ekipanareo noho ny zavatra mahagaga (sy mahatalanjona mahatsiravina) niainany ary hanana fomba fijery vaovao azon'izy ireo ampiharina amin'ny fifandraisan'ny mpanjifany manokana.
Ny fieritreretana ny fanombohana ataonao amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifanao dia afaka manatsotra sy manome aingam-panahy ny drafitra fanombohana ataonao ary mitarika vokatra mahomby sy taona vaovao mahomby. Manentana anao izahay hanozongozona ny kick-off manarakao ary andramo ireto hevitra ireto hitazonana ny mpanjifanao ho eo amin'ny toerana misy azy ireo: eo afovoan'ny zava-drehetra.
Tags: fivoriana fivarotana isan-taonafanombohanafihaonana manombokafanavaozana ny marketingFanavaozana ny vokatrafanombohana varotrafivarotana fivarotanafahombiazan'ny varotravarotra varotrafiofanana varotradrafitra kaonty stratejikampanao varotra ambony
Ashley Welch sy Justin Jones dia niara-nanorina Fanavaozana Somersault, orinasan-kevitra momba ny Design Thinking manome fomba tokana amin'ny fampandrosoana ny varotra. Izy ireo dia mpanoratra ny Naked Sales: Ahoana ny fomba fisainan'ny fisainana endrika momba ny antony manosika ny mpanjifa sy ny vola azo. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady, www.somersaultinnovation.com.
Fomba 3 hanangonana mora foana ny angon-drakitra Prospect miaraka amin'ireo endrika Generation Lead Integrated LinkedIn
Hanampy anao ve i Enterprise IoT hanomboka ny indostrian'ny mpivarotra?